Isticmaalka Ubuntu Linux ee USB - Ikkaro
Inicio >> Software >> Linux >> Ubuntu Linux ka isticmaal USB
Dhammaantiin kuwa xiisaynaya isku dayga, waxaan idiinka tegayaa hab aad awoodid inaad Ubuntu ka maamusho USB ama pendrive, adigoon u baahnayn inaad rakibto, sameysid qaybo, ama waxyaabo la mid ah. Sidan ayaad ku arki kartaa haddii aad jeceshahay iyo haddii aad go'aansato waxaan aadi doonnaa qaybta diskiga.
Sidii aan soo sheegnay, waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan ogaano ayaa ah qeybinta qalabka Linux oo aan dooneyno inaan rakibno. Waxaan go'aansaday Ubuntu, markaa waxaan soo dejinnay Ubuntu Desktop
Iyo talaabada la raacay waxaan soo dejisanay Rakibaadda Universal ee USB
Waxaan qaadaneynaa qalin, oo leh ugu yaraan 2 gigis si loo rakibo.
Qalinkeena waxaan galineynaa USB-ga, furi rakibeyaha oo waxaan xulanaa qeybinta aan soo dejinay oo aan rabno inaan rakibno.
Iyada oo badhanka Browse waxaan doorannaa feylka .iso ee aan soo dejinay.
Waxaan doorannaa kumbuyuutarka USB-ga oo aan siineynaa Abuur
Marka aan ku rakibno USB-geena, waa inaan dib u bilawnaa kombuyuutarkeena isla marka ay bilaabato waxaan bilaabaynaa inaan riixno furaha F12, shaashad tan oo kale ah ayaa bilaabmi doonta.
meesha aad ka sheegi karto kombuyuutarkaaga inuu ka soo baxo disk-ka USB halkii aad ka heli lahayd disk-ka adag ee gudaha ah.
Waana taas, Ubuntu wuu bilaabmayaa iskuna day ;-)
Waxaan jeclaan lahaa inaan ka faaloodo tan USB sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa inuu ka soo kabsado xogta darawallada adag ee aanan heli karin sababtoo ah daaqadaha ayaa joojiyay inay shaqeeyaan iyo in loo qaabeeyo ama loo kala qaybiyo.
Sida loo sameeyo jikada aalkolada
Sida loo sameeyo cryptex
1 faallo ku saabsan "Ubuntu Linux ka adeegso USB"
Sebtember 9, 2010 at 6:13 pm
Waan ka xumahay daahitaanka jawaabta, si fiican ayey u shaqeysaa, waa wax cajiib ah, ma aqaano sida ay igu qaadatay waqti dheer inaan ku tijaabiyo ... Horaanba u sameeyay qayb oo waxaan ku keydiyey diskiga adag. Mahadsanid
Sebtember 13, 2010 saacaddu markay ahayd 8:18 am
Waxaan horeyba u lahaa dhowr maalmood aniga oo aan dib u eegin bartaada internetka, had iyo jeer waxaan helaa wax ama wax kale oo aan qaato, aad ayaan ugu fiicanahay jidka, waxaan u qoraa waxyaabaha soo socda:
Saaxiibadaas oo markii horaba barbariyiin ah oo leh Linux, sidoo kale waxaan weydiiyay cd-kayga adoo adeegsanaya bogga ubuntu laakiin wali ma imaan, caawa waxaan u ogolaanayaa inay soo dejiso, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aan ku rakibayo vmware-ka daaqadaha xp, weli ma ahan Toddobaad ayaa i soo jiitay oo aragtidayda nuugtay, laakiin haddii aan doonayo inaan arko sida ubuntu yahay! Runtii waan ku qanacsanahay haddii aad taas iga caawin lahayd =)
salaan ka timid venezuela Martin
Sebtember 7, 2010 saacaddu markay ahayd 8:34 am
Waxaan u baahanahay inaan isticmaalo Ubuntu maxaa yeelay windows vista bbo ayaa i bilaaba aniga mana haysto nuqul keyd ah, waxaana rajeynayaa inaan ku soo ceshano feylasha barnaamijkan sida aad ku tiraahdo balooggaaga. Waan raacay talaabooyinkaaga, waan soo dagsaday barnaamijka desktop-ka laakiin waa siib, sidee baan u furaa sawirka iso
Sidaad u aragto, tababar badan ma lihi mana sixi karo si sax ah ka dibna waxaan ku shubi karaa rakibayaasha USB-ga caalamiga ah.
Sebtember 7, 2010 saacaddu markay ahayd 8:55 am
Waxaan isku dayayaa inaan isticmaalo Unbutu si aan uga soo ceshto feylasha aragtida maxaa yeelay ma sameynin nuqul nuqul kumana bilaabayo daaqadaha, dhibaatadu waxay tahay inaan soo dejiyay feylka desktopka laakiin waa zip oo ma aqaano sida loo sameeyo ku kala jar 7z iyo winzip ma awoodo ... ma caawin kartaa fadlan?
Sida aad arki doonto waxaan ahay qof aad u tababaran oo uma isticmaali karo si sax ah.
Oktoobar 31, 2010 markay tahay 1:02 pm
Markii aan siiyo F12, ma helayo Qalabka USB ... Waxaan helayaa fursado kale sida:
i 2-3 dheeraad ah, oo aanan xusuusan ... laakiin ma jiro qalab USB ah, ma bilaabi doono UBUNTU
Oktoobar 25, 2010 markay tahay 3:01 pm
Waad salaaman tahay, waxaan ku cusbahay qaybahan waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aan ku rakibo karo Ubunto shay aan ku haysto C: Hadda waxaan haystaa XP. Mahadsanid.
Maarso 9, 2011 markay ahayd 1:11 am
isticmaal USB HDD
6-ka May, 2013 saacaddu markay tahay 12:30 pm
hello eeg io rakib x macnaha usb sida halkan ku qoran waxaan raacay tillaabo kasta oo aan ku rakibo xq aad u fiican haddii ay ka soo baxdo wax xun waa inaan u baahanahay inay la shaqeyso terminaalka iyo konsoles-ka iyo caqligani x wuxuu i weydiinayaa eray sir ah waad ogtahay waxa ay tahay xq aniga Waa mid deg deg ah hadii aad aqriso fariintan ha iloobin plissskeyga hadii ay tahay wax aad u deg deg ah .... Mahadsanid iyo duco